Talada Soonka: Dhiig-karka iyo Wadne Xanuunka.
Author Topic: Talada Soonka: Dhiig-karka iyo Wadne Xanuunka. (Read 22876 times)
« on: June 12, 2016, 03:06:52 PM »
Waxaan qoraalkaan ugu talagalay talane ku siinayaa dadka dhiig-karka qabo iyo dadka wadna xanuunka qabo oo rabo inay soomaan ama hadaba sooman.
Dadka dhiig-karkoodu xakamaysan yahay, way soomi karaan laakiin waa in dhakhtarka kala tashadaan sida ay daawo qaadashada isu badalayso xilliga soonka.
Ogow isbadalka xilliga hurdada bisha ramadaan waxay khalkhal galin kartaa xakamaynta dhiig-karka, maadaama ay dhici karto in habeenkii aad soo jeedid, maalintiina aad seexatid.
Ogow waa muhiim in aad daawada dhiig-karka waqtigeeda ku qaadatid oo aysan isbadalin, haddii aad daawada hal mar ka badan qaadatid, fadlan la tasho dhakhtarka si hal waqti oo xilliga afurka ah kaaga dhigo.
Ogow cunista khudaarta leh maadada kaalsiyamta iyo bootaasiyamta sida baradhada, karootada iyo mooska, waxay daawada ku caawiyaan in dhiig-karkaagu xakamaysnaado.
Ka fogow isticmaalka cusbada iyo waxyaabaha milixda leh iyo cunnada dufanka lagu badiyay maxaayeelay cadaadiska dhiigga ayay sare u qaadaan.
Haddii aad qaadatid daawada wadna xanuunka ee loo yaqaano "Digoxin", ku dadaal in aad qaadatid cunnada ka hor hal saac ama laba saac maxaayeelay cunnada leh liifka ama buunshadu way yaraysaan faa'idada daawada.
Dadka qaba dhiig-karka iyo wadne xanuunka badanaa waa loo ogolaadaa inay soomaan illaa dad dhif mooyee.
Iska ilaali in aad daawada dhiig-karka qaadatid calooshaada oo faaruq ah, maxaayeelay waxay keeni kartaa in dhiigga hoos u dhaco.
Dadka wadna xanuunka qabo oo aan loo ogoleyn inay soomaan, waxaa ka mid ah:
Qof wadne qabad (heart attack) mar dhaw ku dhacay
Qof cadaadiska dhiigiisa uu si sahlan hoos ugu dhici karo
Qof qabo wadne xanuunka "Angina" oo aan waqti lahayn.
Qof u baahan in isbitaal la jiifiyo
Qof aan ka maarmin daawada maalintii.
Qofka cadaadiska dhiigiisa uu hoos u dhaco ma soomi karaa?
Hadduu qofka sidiisa kale uu caafimaad qabo, laakiin soonka awgiisa uu cadaadiska dhiigga hoos u dhaco waxaa lagula taliyaa inuu biyo badan cabo xilliga saxuurta, cunnadane uu ku darsado cusbo, iskane ilaaliyo dhididka badan, jimicsiga, daalka iyo qoraxda.
Akhriso qoraallo xiriir la leh:
1- Dhiig-karka "Hypertension": http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=467.0
2- Wadne qabadka "Heart Attack": http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=685.0
3- Howlgabka wadnaha "Heart Failure": http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=520.0
4- Hoos u dhaca cadaadiska dhiigga "Hypotension": http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5834.0
5- Wadne xanuunka "Angina": http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=668.0
Waxaan idiin rajanayaa soon caafimaad leh, haddii aad su'aalo qabtid iigu soo gudbi qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Views: 10239 October 16, 2016, 06:33:09 PM
Views: 8135 January 04, 2018, 02:03:56 AM
Views: 23165 February 22, 2010, 12:47:32 PM
Views: 30864 January 01, 2011, 08:53:48 PM
Views: 61873 January 30, 2008, 02:32:49 AM